Ngaba uthathe i-Myers-Briggs? ENTP? | Martech Zone
NgoMvulo, Meyi 5, 2008 NgoLwesibini, Oktobha 4, 2011 Douglas Karr
Sonke sikuthiyile ukuphoswa ebhakedeni, kodwa ndangena kwincoko emnandi kunye nomntu okwi-Myers-Briggs. Iziphumo azikaze zahluka kule minyaka ilishumi idlulileyo, ndiyi-ENTP. Nantsi uphawu oluvumelanayo:
Ii-ENTP zixabisa amandla abo okusebenzisa ukucinga kunye nezinto ezintsha ukujongana neengxaki. Ukuthembela kubukrelekrele babo bokukhupha ngaphandle kwengxaki, bahlala bekutyeshela ukuzilungiselela ngokwaneleyo kuyo nayiphi na imeko. Olu phawu, kudityaniswa notyekelo lwabo lokujongela phantsi ixesha elifunekayo lokugqibezela iprojekthi, kunokubangela ukuba i-ENTP inyuswe kakhulu, kwaye isebenze rhoqo ngaphaya kwexesha elimiselweyo. Eyona nto iyenza nzima le meko kukuzimisela kwabo ukuzama izisombululo ezitsha. Oku kubenza bakulangazelele ukuya kumceli mngeni olandelayo xa izinto zidika. Ii-ENTP ziyaxinezeleka xa amandla abo okuphucula engasebenzi kwaye baya kuthintela iimeko apho banokuthi basilele khona.
Ukuba uxinzelelo luyaqhubeka, ii-ENTP ziyaphazamiseka kwaye isimo sabo "esinokwenza" sisongelwa. Iimvakalelo zokungakwazi ukusebenza, ukungabinakho ukusebenza kunye nokungafaneleki kuthatha indawo. Bafuna ukubaleka iimeko ezinxulunyaniswa noxinzelelo ngakumbi kwi-ENTP kunalo naluphi na olunye uhlobo lobuntu. Ukuthandabuza ukuba bayakuba nayo na into efunekayo ukufeza umsebenzi, babeka uloyiko lwabo kwiimeko abanokuziphepha. Uloyiko, uloyiko kunye noxinzelelo emva koko zithintela ukubonakalisa ubuchule babo. Impendulo ye-phobic ekhuselayo ibangela ukuba i-ENTP ithintele impumelelo kwezinye iindawo kwaye ithintele impumelelo abazama ukuyifumana.
Kuyamangalisa (kwaye kuyandikhathaza) indlela echanekileyo ngayo le nkcazo kum. Ukuba ungathanda ukujonga ubuntu bakho, zininzi izixhobo kwi-intanethi. U-Myers Briggs unokukunceda kubudlelwane bakho nabanye abasebenzi kunye nabaxumi, kunye nokubonelela ngemimandla onokufuna ukugxila kuyo ukuze uphumelele.
tags: iitsholemzoboujim irsayukukhula kwefowuniwindowsifowuni ifowuni
Meyi 5, 2008 kwi-9: 22 AM
Ndingu ENTJ. Ndiyavuma ngokupheleleyo-ezi ziphumo zithembekile ngokukhohlakeleyo.
Meyi 5, 2008 kwi-12: 29 PM
UDoug, uyiTaurus, ke uzinzile, uyalondoloza, uthanda umntu ekhaya oya kuhlala esenza umhlobo othembekileyo okanye iqabane. Ndikuvile ukuba uthanda ukuhamba ixesha elide elwandle ukutshona kwelanga.
Abantu bathambekele ekuchongeni iinxalenye zeemvavanyo zobuntu abanokuvuma ukuzamkela. Nokuba kwisiza seMyers-Briggs, bayakhankanya ukuba iziphumo azivumelekanga kangange-15-47% yexesha. Ndizithandabuza kakhulu ezi mvavanyo. Ndizithathile ngabom ezi mvavanyo ngokungachanekanga, kwaye bendinabo endisebenza nabo / nabaqeshi beziva ngathi iziphumo zimele ngokuchanekileyo ubuntu bam, (kwaye ndizamile ukwenza kubo.)
Phendula ngo "Ewe" kuyo yonke imibuzo kuvavanyo lwe-Intanethi lwe-Myers-Briggs, kwaye ubone ukuba usenokwazi na ukujonga iziphumo. (Ungazihoyi iileta kunye neempendulo ozifumana rhoqo.)
Meyi 5, 2008 kwi-1: 22 PM
NdinguAries… ndinenkani uyakhumbula ?!
Sep 17, 2008 ngo-10: 56 PM
Mnu. Douglass, ndingathanda ukucela umngeni kuwe ukuba uthathele ingqalelo ukuthatha i-Myers Briggs kwindawo efanelekileyo nenesidima. http://www.type-resources.com/ExploringYou/protostart.html
Uyabona, xa ilawulwa ngokufanelekileyo, uya kuthatha isigqibo ngokusekwe ekufumaneni ukuba zonke izinto ozikhethayo zithetha ntoni, loluphi ukhetho lwakho lwangaphakathi. Ayisiyonto ilungileyo, njengoko i-Myers Briggs yenzelwe, ukuthatha uVavanyo kwaye emva koko ichazwe ngohlobo oluchaziweyo. Xa ugqibile ngokokuziphatha, ukhetha (ukhethe ngokwakho), emva koko uthelekise nohlobo oluxeliweyo, emva koko Uvavanye ezi zinto zimbini ukumisela olona hlobo lwakho lulungileyo. NGOKU… kwaye kuphela emva koko, apho iMyers Briggs isetyenziselwa ngokupheleleyo amandla ayo: kukunceda uqonde ngakumbi malunga nawe, ukuze uqonde ngcono abantu. Phuma http://www.type-resources.com/ExploringYou/protostart.html Inguqulelo ekwi-intanethi yendlela yokuziphatha enokuzifumanisa ngokwakho nge-Myers Briggs Type Indicator. Kunomvuzo omkhulu, xa ulawulwa ngokuchanekileyo. Luvuyo kuhambo lokuphela ...
Meyi 6, 2008 kwi-3: 39 PM
Heh, iyamangalisa, nam ndiyi-ENTP (umda we-INTP). Kwaye ezo nkcazo zibonakala, ubuncinci kum.
Meyi 11, 2008 kwi-5: 05 PM
Meyi 11, 2008 kwi-8: 18 PM
Nokuba ndizithatha kangaphi ezi mvavanyo (okanye loluphi olu vavanyo ndilwenzayo) ihlala iphuma ngokufanayo. Ke ndicinga ukuba ndinamathele kuyo (kwaye iyangena nayo…)
Kwaye ndingu-Aries 🙂
Agasti 23, 2008 kwi-2: 33 AM
Kuyamangalisa oko. Ndingu-ENTP + Aries naye. Ndizifumene iinkcazo zazo zombini ezinokufana kwaye ziyinyani kum
Ngomhla wama-28 ku-Disemba 2012 ngo-2: 21 PM
Ndilinenekazi le-ENTP, malunga nokuqala kweenkosi kwiNtengiso kunye nobuchule eLondon. Andikazimisi malunga nokufumana umsebenzi. Naluphi na iingcebiso zakho eziphezulu kum uMnu Karr? 🙂
Ngomhla wama-28 ku-Disemba 2012 ngo-2: 29 PM
@yasminebennis: disqus malunga neshumi leminyaka eyadlulayo ndaqala ukubhloga kwaye kwabuguqula ubomi bam. Ngoku ibhlog yindawo ephambili yeArhente yam (DK New Media). Yonke le nto yaqala ngokwabelana ngeziphumo zam kunye namava akwi-intanethi nawo wonke umntu… ndacotha ukwakha igunya kunye negama kwisithuba esihlonitshwayo. Ndihlala ndizama ukuba nethemba kunye nokwabelana ngobuntu bam ngokunjalo (nangona ndizinzile kuThixo nakwezopolitiko) :). Ndicinga ukuba ukuqala ibhlog yakho okanye ukubuza ukuba ube ngumbhali onegalelo kwenye yomdla wakho kunokuba yindlela elungileyo yokuqala.
Ngomhla wama-28 ku-Disemba 2012 ngo-2: 38 PM
Oku kuyinqaba ngokumangalisayo! Ndigqibe kwelokuba ndenze ibhlog yeentsuku ezi-4 ezidlulileyo! Ngale nto, ndiza kuthetha ngemiba yoyilo kubuGcisa, kwiShishini nakwimpilo yemihla ngemihla. Ndingathanda umbono wakho wakube ulungile! Enkosi ngempendulo yakho ekhawulezileyo !!
Ngomhla wama-30 ku-Disemba 2012 ngo-9: 08 PM